Waa Tee Maxkamadda Xukunka dilka ah ku xukuntay Donald Trump
[ October 27, 2021 ] Shir Deg Deg ah oo xiligaan Gurceel uga soconaya Ganacsato Siyaasiin iyo Xoogaga Ahlusuna	Galmudug
[ October 26, 2021 ] Beesha Caalamka oo si Adag uga Hadashay Dagaalada Gurceel.	Galmudug
[ October 26, 2021 ] Maxkamada Gobalka Banaadir oo xukuntay dad ajaanib ah	Wararka Maanta
[ October 26, 2021 ] Dowladda Maraykanka oo ka Fiirsanaysa Taageerada Ciidamada Danab oo ka qeyb qaatay Dagaalkii Gurceel	Galmudug
[ October 26, 2021 ] Dhageyso Madaxweynaha Galmudug oo si kulul uga hadlay Dagaalka Gurceel waxuuna weerar afka ah ku qaaday Ahlusuna iyo dad uu shegay inay gadaal ka riixayaan	Galmudug
HomeWararka CaalamkaWaa Tee Maxkamadda Xukunka dilka ah ku xukuntay Donald Trump
September 23, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Maxkamad fadhigeedu yahay dalka Yemen ayaa xukun dil ah ku ridday 10 qof oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump iyo dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga, Amiir Maxamed Bin Salmaan.
Sidoo kale boqorka Sacuudiga, Salmaan Bin Cabdulcasiis Aala Sacuud ayaa ka dhex muuqda liiska dadka lagu xukumay dilka toogashada ah oo loo heysto inay “mas’uul ka ahaayeen” xassuuq labo sano ka hor loo geystay arday reer Yemen ah.
Garsooraha ayaa sheegay in xukunkaas uu ku riday “saddexda eedeysane” iyagoo ka maqan maxkamadda, oo ku taalla gobolka Sacda ee dhaca dhinaca waqooyi-galbeed ee dalka Yemen.
Warbaahinta caalamka, oo ay u badan yihiin kuwa Carabta ayaa si weyn u hadal hayay wararka ku saabsan xukunkaas oo lagu dhawaaqay maalintii Talaadada.
Shakhsiyaadka xukunka lagu riday ayay garsoorka maxkamaddu sheegeen in lagu helay dambi la xiriira ku lug lahaamshaha duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha xulafada Sacuudiga oo sanadkii 2018-kii lagu beegsaday bas ay saarnaayeen carruur iskuuleey ah, sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka Yemen ee SABA.
Baska ardayda waday ayaa gantaal lagu dhuftay isagoo dhex maraya suuq ku yaalla magaalada Dahyan ee gobolka Sacda.
50 qof oo rayid ahaa, oo u badnaa carrur arday ah ayaa ku dhintay halkaas, ku dhawaad 80 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Marka laga soo tago Trump, Boqor Salmaan iyo Maxamed Bin Salmaan, dadka kale ee ku jira liiska shakhsiyaadka toogashada lagu xukumay waxaa ka mid ah madaxweynihii xukuumadda Riyaad taageerada ka heystay ee Yemen, Cabdi Rabu Mansuur Haadi, Amiir Turki bin Bandar bin Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Sacuud – oo ka tirsan amiirrada boqortooyada Sacuudiga – xoghayihii hore ee waaxda gaashaandhigga Mareykanka James Mattis iyo saraakiil hore oo ka tirsanaan jiray dowladaha Mareykanka iyo Yemen.
Garsooraha xukunka ku dhawaaqay, oo lagu magacaabo Riyaad al-Ruzaami, ayaa sheegay in dhammaan dadka dilka lagu xukumay sidoo kale laga doonayo inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan 10 bilyan oo doolar, taasoo la siin doono ehelada dadkii ku dhintay duqeynta.
Go’aanka kasoo baxay maxkamadda ayaa kusoo aaday xilli dhawaan sagaal qof lagu fuliyay xukun dil toogasho ah oo lagu riday.
Kenya iyo Qadar oo wadahadal ka yeelanaya Arimaha Badda Somaliya
Maxaa iska debalay Wada Hadaladii Farmaajo iyo Rooble
Shir Deg Deg ah oo xiligaan Gurceel uga soconaya Ganacsato Siyaasiin iyo Xoogaga Ahlusuna
Beesha Caalamka oo si Adag uga Hadashay Dagaalada Gurceel.
Maxkamada Gobalka Banaadir oo xukuntay dad ajaanib ah
Dowladda Maraykanka oo ka Fiirsanaysa Taageerada Ciidamada Danab oo ka qeyb qaatay Dagaalkii Gurceel
Dhageyso Madaxweynaha Galmudug oo si kulul uga hadlay Dagaalka Gurceel waxuuna weerar afka ah ku qaaday Ahlusuna iyo dad uu shegay inay gadaal ka riixayaan